Izitolo Zokuthengisa - Amathuba weRetail Franchise | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izitolo Zokuthengisa
Okufakiwe Kwezitolo Zokuthengisa
Izitolo Zokuthengisa Ezintsha zakamuva
Besilokhu sinentshisekelo ngokukhonza ikhofi ekhethekile kakhulu ekhethekile kusukela ngosuku lokuqala. Kuningi kangakanani ngathi ...
Umhlaba owodwa weHalal
I-One HALAL GLOBAL - UMHLANGANO WOKUQALA WOKUQHAWULA KOMhlaba WOKUQALA KWEMPAHLA I-Rise of Halal yabathengi abangamaSulumane nabangewona amaSulumane ...
Thola ikusasa lokuwasha izimoto Esimiselwe iminyaka engaphezu kwengu-13, sinikezela ngokugeza izandla kanye nezinsizakalo zokuphamba ...
Tshala imali ebhizinisini lekhofi lapho uthola khona izimbuyiselo eziqinisekisiwe zanyanga zonke, isabelo esihle sezithako zonyaka, KAKHULU thina ...
Umkhakha wezentengiselwano ubukade ungumkhakha omkhulu kepha futhi nomkhakha ohlukahlukene kakhulu ngoba okuthengiswayo kungahamba kusuka ezingutsheni kuya kwimikhiqizo yokudla nakho konke okuphakathi.
Izibalo ze-Retail Franchise
Manje sizoklelisa ezinye izibalo ngokukhula kwakamuva okubonwe ngumkhakha wezentengiso emhlabeni wonke. Futhi lokhu kufanele kusize ngethemba lokuthi noma ngubani obheke ukuthenga iphaneli ngaphakathi komkhakha wezentengiso ukubona ukukhula kwemikhakha yonke eminyakeni edlule kanye nokubikezela okusha kweminyaka ezayo.
Ngo-2019 i-UK yamangala imakethe yezentengiso efinyelela Ama- $ 394 billion amaBrithani.
Ukuthengisa okuthengiswayo komhlaba jikelele kulindeleke ukuthi zifinyelele kuma-dollar ayizigidigidi ezingama-30 ngonyaka wezi-2023, zenyuke cishe kuma-23 trillion amadola aseMelika ngo-2017
Njengamanje kunezitolo ezingaphezu kuka-309,000 zezitolo ezitolo ezweni lonke lase-UK
Ngabe lezi zibalo zibonisa ini ngomkhakha wezentengiso?
Lezi zibalo zikhombisa ukuthi umkhakha wezitolo awukona i-US ne-UK kuphela, kepha emhlabeni wonke. Umkhakha wezentengiso ngumkhakha omningi kakhulu kwisidingo esikhulayo
Ngaphezu kwalokho, iyakhula minyaka yonke futhi ayikhombisi uphawu lokukhula ngokushesha nokwanda kwehle. Lezi zibalo zingaphakamisa ukuthi manje kube isikhathi esifanele sokutshala imali kulo mkhakha omkhulu. Uma ungaqiniseki ukuthi yimuphi okufanele ukhethe kepha ngincomela ukuthi ubukeke kahle ngokusebenzisa isigaba sethu sokuthengisela ama-franchise ukuthola ithuba lakho lephupho le-franchise.
Isiphetho ezizungeze imboni yezitolo.
Ngokuvamile imboni yezentengiso ihlala ibonisa ukukhula okukhulu. Futhi kungaba yisikhathi esihle sokubheka kuma-franchise ahlobene nezobuchwepheshe ngaphakathi komkhakha wezentengiso. Njengoba lokho kukhombisile ukukhula okukhulu kakhulu eminyakeni eyishumi edlule njengoba abantu bethembele kakhulu kubuchwepheshe ukuthola imikhiqizo yabo manje hhayi bona. Futhi uma ungaqiniseki ukuthi ufuna isitolo sokuthengisa noma nje inkomishi yakho yetiye. Ngincoma ukuthi ubheke isiqondisi sethu ngoba iFranchiseek iyisiqondisi esikhulu kunazo zonke sama-franchise esihlinzeka ngama-franchise amaningi athengiswayo ukwanelisa izidingo zakho.